Jose Mourinho oo dacwad lagu soo oogey ayna macquul tahay in laganaaxo Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo dacwad lagu soo oogey ayna macquul tahay in laganaaxo Sabab?
(09-10-2018) Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa lasheegayaa in lagu soo oogi doono kadib markii lagu eedeeyey in uu ku xad gudbey sharciga Gaar ahaan kulankii ay Newcastle United.kaga badiyeen 3-2.
Jose Mourinho ayaa lagu eedeeyey in uu muujiyey ku qancsanaan la aan Go aamadii Garsoorihii kulankii dhex dhexaadinayey Cayaartii Newcastle United.ee ka dhacday Garoonka Old Trafford.
Mourinho ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in xiligii laga sii baxayey Tunelka Caytaartu markii ay dhamaatay uu lamurmay Garsooraha Cayaarta kuna bax baxsaday waxaana Xiriirka FA ga England sheegeen in baaritaan lagu samayn doono qaladaadkii uu Sameeyey.
Manchester United ayaa ka soo laabtay 2 Gool oo lagala hor maray waxaana Goolasha u kala dhaliyey Cayaartoyda kala ah Juan Mata, Anthony Martial iyo Alexis Sanchez waxaana Cayaartaan ku xirnaa mustaqbalka Macalin Jose Mourinho.